The main yesiteleka osikweni Navy Russian kubhekwe ngwenya, enuzi kanye ingenakukwazi kagesi. Ziyakwazi inkonzo enzima kude ugu abahlala bomdabu, unobtrusively obonisa sengozini nezitha ezingaba yingozi, ngezikhathi ezithile, avume "ukubona" ngamabomu. Okuphambili kusukela ekujuleni kolwandle e izikhathi eziningi ezingalindelekile, eduze band aqondisa nge navies kwamanye amazwe, ubabonise izinduna imikhumbi ukuthi, naphezu lokungabonakali, aziyi ndawo. Ngo sokuthula, umkhuba onjalo kubhekwa evamile, kanti esimweni lapho khona ngwenya impi kubonakala ngendlela ehlukile. Kodwa abasebenza ngemikhumbi-ngwenya ngumnikazi amaqhinga kanye ukunyakaza imithambo ebusweni cishe akunakwenzeka ukuthi ufihle, ikakhulukazi ezifana abathwali izindiza ezinkulu noma Cruisers nge amandla enuzi. Kubonakala sengathi lezi zidlakela asesabi muntu.
Sikhona yini isidingo salokhu zilo?
Yileyo indlela eziphatha olwandle missile yenuzi impi esheshayo engahlomile kakhulu "Petr Veliky". "Military Buyekeza" - iwebhusayithi esizinikezele izikhali basekhaya nabamazwe angaphandle izinhlelo, - ukwethula izivakashi imininingwane eminingi yobuchwepheshe isakhiwo omkhumbi, nokwenza kwayo egijima, kodwa phindo ngokuhlaziya ukulwa layo ukusebenza uma kwenzeka i-marine sina noma impi yomhlaba wonke. Nokho a impi esheshayo engahlomile kakhulu, eyasungulwa ngo-1986, kungenzeka ukuthi akuselona ukuhlangabezana nezidingo kule nkulungwane entsha yeminyaka, kwathiwa yenzelwe ngaphandle ngekucikelela ubuchwepheshe akhawunti kanye ukubonakala ongaphakeme kuyinto enkulu ukukhanya umgomo elikhanyayo. It kunezinzuzo, kodwa izinkinga eziningi, ezifana okuqukethwe ibutho elilwayo iyunithi abiza yengcebo Russian e round isamba ngonyaka. Ngakho kunesidingo uma izimoto zethu yenuzi inikwa amandla yi impi esheshayo engahlomile kakhulu "Petr Veliky" noma kangcono futhi ushibhile ezivamile ngwenya, izinhlelo missile futhi zezindiza asolwandle? Waphumelela kangakanani-ke uyokwazi ukuvikela imingcele Russian zasolwandle uma kwenzeka izimo ezikhethekile inqubomgomo angaphandle? Yini anakho izimbangi olwandle?
Le mibuzo zidinga izimpendulo olunzulu futhi enemininingwane.
Ngalezo zinsuku, lapho imikhumbi eSoviet Union wawuqondiswa Admiral Gorshkov, nesu amafilosofi asolwandle wancika imikhumbi emikhulu, kokubili ebusweni futhi kwamanzi. I namandla esinganqobeki kweSoviet Navy ngwenya-babonisa ngwenya eziningi enuzi kanye Cruisers, ogcwele ama-missile iziqhumane, radars kanye antenna. izitshalo amandla Udizili ayisesemikhulu uhla ukusetshenziswa nokusebenza zamabutho asolwandle. Nikeza ( "Petr Veliky" kusukela ngo-1998) ukuthi kungenzeka khona ebonakalayo kunoma iyiphi ingxenye izilwandle zomhlaba sabekwa ngesikhathi Baltic Isitshalo "Yuri Andropov". impi esheshayo engahlomile kakhulu Nuclear awuzange eyakhelwe kwelinye, ngaphakathi spite of nobunzima obukhulu kwezomnotho kwenkathi kabusha le shipyards sekuqala imikhumbi emine 1144 iphrojekthi lokuqala ithole igama jikelele "Orlan". "Abafowethu" AboMdabu, "Andropov" steel "Kirov", "Frunze" futhi "Kalinin", futhi yaqanjwa abanegama LamaKhomanisi. izenzakalo ezalandela, okuyinto laqala kuleli zwe, wabonisa ukuthi ngokubheja enjalo emikhulu umsebenzi kabusha ebusweni amabutho kubaholi Navy yezwe embalwa ashisayo. Okwamanje, aphume lonke uchungechunge, kuphela eyodwa zenuzi missile impi esheshayo engahlomile kakhulu "Petr Veliky" uphiko combat-ngomumo. Yini eyokwenzeka "Admiral Lazarev" (zangaphambili "Frunze") futhi "Admiral Nakhimov" ( "Kalinin"), kuyacaca basuke iyathuthukiswa futhi uyokuma kuze kube sekupheleni kweminyaka eyishumi ukusebenza. Isiphetho "Admiral Ushakov" ( "Kirov"), sad, elinde kabusha umkhumbi.
Sneak kuze buthule, ngeke
Lokhu umkhumbi akuyona nje big. Okukhulu kuno-ke kukhona abathwali kuphela. Kungenzeka iminyaka esiqondisweni ezizimele, esikhiqiza esikhundleni lohleliwe kwebasebenti kanye libuyisele amanzi amasheya ukudla. Ithimba siqukethe 727 amatilosi, sergeants, amaphoyisa nezikhulu, kuhlanganise 18 abashayeli bezindiza kanye nabasebenzi ukulungisa, ukusebenza izindiza ezinophephela emhlane. Ijubane ifindo 32. Displacement of 26.000 amathani. Kumele kukhunjulwe ukuthi ukuqinisekisa ekusithekeni of ukubukeka kwayo kunoma iyiphi izwe ocean endaweni cishe akunakwenzeka. Futhi akusiwona ubukhulu, noma kunalokho, hhayi kuphela kuzo. I nokuwela kwawo sisebunzimeni noma iziteshi disavows kanye ongaphakeme-tonnage imikhumbi, hhayi ukuthi impi esheshayo engahlomile kakhulu enuzi "Petr Veliky". Izindaba ukuthi ethile yenethiwekhi ongumhluphi noma frigate badabula Suez Canal, le Bosphorus kanye iDardanelles, kweso ukuhlakaza emhlabeni wonke. Ngakho-ke yini iphuzu lalo elikhulu uma indawo yayo njalo eyaziwa, uma hhayi kusukela TV, ngokuvumelana ukuqapha satellite?
Kuhleli obala ukuthi ukubonakala njalo osebeni lwaleli kulomkhumbi enamandla iyiphi Isitha ezingaba siqaphe futhi ukumemezela alamu jikelele. ngabe ukusabela okufanayo kube induna kwakwakhe oluhle ngemikhumbi yempi, lapho, ngasizathu simbe, tadisha esindayo zenuzi missile impi esheshayo engahlomile kakhulu "Petr Veliky". Uma ngalesi sehlo kwenzeka ngezikhathi zokuthula, zonke Uqede njalo "exchange of inhlonipho," le isigaba ngenhlonipho uyembulile imigqomo yakhe futhi isimiso sokuzivikela, "make some noise" isixhumanisi uphume "njengoba kungena imikhumbi olwandle." Kodwa-ke ngizoya okukhulu okuningi libi kakhulu uma kwenzeka impi. Ngokusho ilitshe isitha esikhulu umlilo ngokushesha evulekile, futhi uyokwenza noma yini ukuze agqoke phansi impi esheshayo engahlomile kakhulu. I siqala uyosabela anti-umkhumbi kweminsalo, torpedoes, emoyeni kanye nezinye izenzo yokulwisana nalo, "Petro Veliky"? Futhi uma ungakwazi abeke yena uma isidingo isiteleka pre-emptive?
Yebo. Ukuze wenze lokhu, has konke okudingayo.
Kuyingqayizivele hhayi kuphela ubukhulu. Ezweni kukhona enjalo kungekho imikhumbi neavianesuschih zezikhali "Petr Veliky". impi esheshayo engahlomile kakhulu weNyutliya ebhodini arsenal omkhulu zonke izindlela okungadala umonakalo umlilo futhi ukuvikela ukuhlaselwa emoyeni, ukuhlaselwa ngwenya, izinsongo okwami kanye nezinye izingozi. "Osezingeni Chief" kukhona kweminsalo 'Granit ", efakiwe iziqhumane amabili phakathi komkhumbi.
Attack of the iphakethe lezi amagobolondo sikhuthazele kungenzeki, banezizathu ehlangene, yama yodwa uhlelo lokulawula. Flight esihlelwe "umholi" bona ahlule wonke amanye kweminsalo, futhi uma ukuhlulwa isitha sakhe missile kusho kukhona "isabelo" ngokuzenzekelayo ungumholi omusha. Ngokuhlanganyela umsakazo kokuthikanyezwa, futhi nokuthungatha izinto ezingamanga esingu "granite" angabhekwa esicindezelayo.
Air yesimiso sokuzivikela S-300F (izinhlelo zokusebenza zasolwandle) kulekelelwa anti-aircraft izinhlelo "angababulali" futhi "Chestnut". Lezi zakhiwo avikelekile emiphumeleni Tarka anti-umkhumbi ezicitshwayo umkhankaso kuhlanganise kusuka ezindizeni. Ngaphezu kwalokho, abakwazi ukuhlasela ngisho amabhomu ultra-eqondile laser isiqondiso.
Ukuhlasela torpedo futhi missile izikebhe futhi kuhlulekile. Ngaphezu kwalokho, kukhona missile kanye wezikhali 130-osezingeni, bakwazi hit at ibanga 22 amakhilomitha. Ukuze silwe ne-ngwenya isitha zenuzi impi esheshayo engahlomile kakhulu ezisindayo "Petr Veliky" ifakwe iziqhumane eziyishumi "Impophoma" nge ezine kweshumi anti-tank guided ezicitshwayo RSL-40, futhi ubasize ukuthola Ka-27 - bobabili. Futhi lokhu akuyona yonke.
Ngokuvamile, eziningi izikhali. Futhi umlilo ukuzivikela futhi zihlasela kunensada ukugcina.
Phantom of the Eighties?
Nokho, konke lokhu akusho ukuthi Tarka "Petr Veliky" angabizwa ngokuthi ephelele impi esheshayo engahlomile kakhulu unsinkable ngokumelene lapho isitha engenamandla. izikhali enjalo ukumane akunjalo, ikakhulu njengoba umkhumbi lwenzelwe isikhathi eside, cishe amashumi amathathu eminyaka edlule. Phakathi nalesi sikhathi, lempi shipbuilding umqondo ishintshile, babe Silhouettes ezahlukene yempi, uvele engavamile uhlaka kolwandle "Stealth" zinyamalale eziyinkimbinkimbi aluka antenna lula amafomu, wabuka imigqa babe eziphukile. Abanye ochwepheshe emkhakheni yezikhali "Petr Veliky" (vasi esindayo yenuzi impi esheshayo engahlomile kakhulu Project 1144) Kubonakala sengathi isipoki inkathi zakudala we yoma futhi Eighties. Kakade ukuthi unesikhathi resonant imigqa eyamukela, radar kanye nezokuxhumana antenna eziningi. Futhi, unikeze isibonelo sokuthi ochwepheshe ezifana e-US, "Orli Berk" - waba umbhubhisi, wakha nazo zonke izidingo zanamuhla for ngobuqili, ulwazi ukwesekwa.
Yebo, umchithi US Kugcizelela ne ukubukeka kwalo ultra-yanamuhla. Kumane irobhothi-transformer zohlobo oluthile, alinaso izingxenye ophumile, ngcondvomshini inikeza (ngokuvumelana nePentagon) kusenesikhathi futhi izinqumo nokusebenza fast kakhulu. Kukhona ukukhathazeka ngokuthi yimpumelelo kangakanani bazokwazi usebenze impi esheshayo engahlomile kakhulu enuzi "Petr Veliky" ngokumelene "Aegis" uhlelo, okuyinto ifakwe abachithi uhlobo "Orli Berk".
Kodwa akubona bonke sad kangaka. Iqiniso lokuthi imikhumbi zakamuva American zadalwa ngesisekelo izimiso ezimbili eziyinhloko: okwenza nokuhlanganiswa nokulawula izinhlelo ukunciphisa izindleko.
Radar esiteshini AN / Spy-1, kusethelwe ku- "Orli Berk" njengoba antenna isebenzisa ezine afanayo ikhishiwe, fixedly exhunywe superstructure. Yonke uhlelo ivaliwe a machining isikhungo esisodwa, okuyinto Yiqiniso, kunezinzuzo ezithile-aspect umsindo amasosha omzimba, kodwa futhi unciphise uhla amabanga yokutholakala futhi kokulandela bamatshe. Ikakhulukazi, lolu kusimo kuzibonakalisa esidingekile kuveza ukuhlaselwa leSupersonic ongaphakeme-flying anti-umkhumbi kweminsalo, okuyinto has a "Petr Veliky". Nuclear impi esheshayo engahlomile kakhulu sibonga lingakanani bangafeza okuningi izikhali, futhi esinothi, liphezulu, ukunikeza isixwayiso ekuseni lezinto ngisho ezifana ezicashile ezifana imikhumbi ikilasi "Orli Berk" (okuyizinto ongabonakali ukubiza namanje bengayi).
Mayelana antenna "Petra Velikogo"
Yebo, eziningi izitsha, futhi kungenxa yokuthi ngakho ngokucacile ebonakalayo radar zesikrini, "Petr Veliky". impi esheshayo engahlomile kakhulu Nuclear ifakwe iziteshi radar ezintathu, ngamunye okuyinto efeza ingxenye yayo umsebenzi. "Kwelanga" (MP-600), eqondiswa foremast, enza umsebenzi Uhlolojikelele. Ngezansi, emgedeni, elise Radar "frigate M 2 '(MP-750), inquma ilitshe ezintathu uhlela. On the foremast setha antenna "mistimed" (MP-350), ikwazi ukuthola Okuqondiwe ongaphakeme-flying - lena isici entula neketanga lovumelanako anti-American Ukuvikelwa "Aegis" uhlelo. "Tackle" usebenza ezimbili Ukudidiyela uhlelo, futhi high rate scan lihambisana kokuphakama engela encane ukunikeza ukusebenza oyifunayo. Ngakho, naphezu ukubonakala kwaso, Tarka "Petr Veliky" has zonke amathuba ukuze hit umkhumbi okuningi wanamuhla isitha ezingaba, amshaya zonke zinkulumo zakhe ezicebile. yena angakwazi phambili, ngakho-ke, ukugasela akusho ukusongela ukuthola isitha. Flip ezicitshwayo ke unamandla ngempela ukwenza lokhu, has konke okudingayo.
Umlando uyazi izibonelo eziningi lapho yempi ezazisemizini Navy amashumi amaningi eminyaka. Ezenziwe zaqina umzimba, ukushayela ezinhle namakhono elawula futhi displacement esikhulu ukunikeza isisekelo sokuthethelelwa sesimanje umkhumbi bese beqhuba uhambisane nezidingo okwamanje. Kukhona izimpawu ukuthi impi esheshayo engahlomile kakhulu yenuzi-powered "Petr Veliky", izici lobuchwepheshe ongatholakala ngokuqinisekile liyobizwa ngokuthi oluvelele, uzobe esebenza isikhathi eside. Akanalo analogue ngisho imikhumbi obufanayo esikhungweni samandla enuzi, njengokuthi "VA" noma "Long Beach", mancane kakhulu kunalawo iwuhlelo yethu yeNyakatho Fleet e ukufuduka, futhi kungakho phezu ezingaba sesimanje. Uhlukile nesimiso salo ngamandla, kuhlanganise ezimbili okusheshayo neutron ophendulayo nasizayo boilers, ukwandisa umthamo we megawatts 300.
Ngokuphawulekayo, Kwakusimangaza ezifuywayo shipbuilding umkhakha ungumdali igama Russian Navy, owaqala lo msebenzi omuhle ekwakheni nesizotha ngesikebhe esincane.
Mhlawumbe kuzoba amashumi eminyaka ngaphambi kokuba isikhathi lapho esuswa Navy izikhali missile yenuzi impi esheshayo engahlomile kakhulu "Petr Veliky", okuzokwenza eza esikhundleni imikhumbi entsha yeminyaka yesithathu.
Welding Compound okuqinile
Niobium band: ukukhiqizwa, izakhiwo, izicelo
Uhlelo lokuvotela jikelele olubalulekile ukubaluleka komthetho wokhetho, njengokuyisisekelo ekukhetheni inkambo yezombangazwe. (Kusebenza ku
Izinhlobo zeSayensi. Isigaba samanje
Chris Farley: indaba yokunyuka nokuwa komculi omkhulu wamahlaya
Kuhle design endaweni suburban: 6 esingamahektare isimo esihle
"Skyrim": crossbow. Ngingayithola kuphi?